Ahlu-Sunna oo ka warbixisay xaaladooda ammaan iyo wararkii u dambeeyey ee Dhuusamareeb – Hornafrik Media Network
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo goor dhaw warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in mas’uuliyadda ammaankaadooda ay ku wareejiyeen Taliya guutada 15aad ee ciidanka xoogga dalka, isla markaana ay hadda ku suganyihiin xaalad degan.
Sheekh Shaakir ayaa sheegay in mas’uuliyada ammaanooda, tan magaalada Dhuusamareeb, gadiidkooda iyo hubkoodaba ay ku wareejiyeen Taliyaha guutada 15-aad Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame, oo aysan ciidamadiisu qeyb ka aheyn dagaalkii shalay ay la galeen ciidamada dowladda.
Jeneraal Mascuud ayaa ahaa Taliyihii ciidankii la qarameeyey ee Ahlu-Sunna, waxuuna hadda hoggaamiyaa guutada 15-aad, qeybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka.
Xarunta Inji haatan waxaa ku sugan ciidamadii dowladda federaalka ee dagaalka la galay kuwa Ahlu-Sunna, waxaana sawirro laga soo qaaday ay muujinayaan burbur baaxad leh oo Inji ka soo gaaray dagaalkii saacadihii lasoo dhaafay ku dhexmaray ciidamada Ahlu-Sunna iyo kuwa dowladda.
Saakay waxaa degan xaaladda magaalada Dhuusamareeb oo labadii habeen ee lasoo dhaafay dagaal marti galineysay, waxaana sugaya ammaanka magaalada ciidamada dowladda federaalka ee dhawaan Dhuusamareeb la geeyey.
Dhuusamareeb hadda waxaa ka socda dadaallo lagu kulansiinayo hoggaanka Ahlu-Sunna Waljamaaca iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor.